Version 0.6.6 – Ugu dambeyntii! ammaanka sii daayo a
November 12, 2010 by dalabyo 13 Comments
Site Scripting Cross -> XSS
Waxaan jeclaan lahaa in aan u mahad celiyo Markaasaa Yashuuca wuxuu Hansen iyo Scott Caveza ay gargaar ee aqoonsiga iyo caawinta noo haana laba dayacanka XSS lahaa awood u leh in saameyn ku users isticmaalaya Internet Explorer browser leh qoraalkii ka hooseeya 8, ama marka ilaalinta xss ahaa si cad off. Waxaan fogaadaa rabitaanka wac version this 0.6.6.6 iyo dib u bilowdey siyaasadaha magacyadan joogtada ah. Dayacanka Kuwa aadan khatar kasta oo si Webmasters ama PDF isticmaalaya Transposh, laakiin si users laga yaabo in uu ku kalsoon tahay qoraallada ka soo goobahan oo isticmaalaya dhuu-ka Habka XSS.
Sii daynta Tani waxa kale oo xidhmo xidhmo isugu daray laba iskujoog oo kale in horay ayaa ka go'an iyo suurto sugayay lahaa haddii kale for release dambe, marka hore ay horumar yar oo si Cole ayaa ka, taageero qaar ka mid ah war dheeraad ah html suuragelinayo “hay'adaha dhawamada” sida &Dadka shilalka; kaas oo lagu abuuray by software isku dayaya in ay ka khaarajiyeen user ah, waxaan jeclaan lahaa inaan u mahad archon810 on isaga oo caawimo ah ee Warbixinta kutaan this.
Ugu dambeyntii waa isbeddel ku taageero ah ee Google Sitemaps matoorka XML, daloola ee ay leedahay mid ka mid warqad saaro si ay u leeyihiin taageero sax ah, waayo php5.3, iyo wararka kale ee wanaagsan, version soo socda 4 of plugin this ayaa taageero horey u dhisay, version this waxay kaloo ka caawisaa in jejebiyay 50k xadka url in dadka isticmaala qaar ka mid ah lahaa. Sidaas u mahad waxaan lahaa Arne Brachhold on inuu shaqo weyn on mashruucan.
Sidaas qof, tagaan iyo tayeynta! sababtoo ah raadinta image ah u waafaqayaan this post ahaa sida taam ah way adag tahay.
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: google-ee hobyoradio-sitemaps, yaryar, sii daayo, securityfix, plugin wordpress